म्याग्दीको लागि ७२ वटा मतदानस्थल सिफारिस » खबरहरुको एउटै केन्द्र
म्याग्दीको लागि ७२ वटा मतदानस्थल सिफारिस
शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:५३ मा प्रकाशित !
११ चैत, म्याग्दी। आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीमा ७२ वटा मतदानस्थल तोकिएको छ । जिल्ला मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा निर्वाचन गराउन ती मतदानस्थल निर्धारण गरेको हो ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी केदारनाथ पौडेलले मतदानस्थल ७२ वटा रहेपनि मतदाता सङ्ख्याका आधारमा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिने जानकारी दिए । नगरपालिका र गाउँपालिकामा पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल तोकिएको र मतदाताको सङ्ख्याका आधारमा एक हजारभन्दा बढी मतदाता भएमा एउटै मतदानस्थलमा पनि एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र तोकिने उनले बताए ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १७ वटा मतदानस्थल तोकिएको छ । त्यसैगरी, रघुगङ्गा गाउँपालिकामा १४, धौलागिरि गाउँपालिकामा १२, मालिका गाउँपालिकामा नौ, मङ्गला गाउँपालिकामा सात र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १३ मतदानस्थल तोकिएको छ ।
विसं २०७० को निर्वाचनमा ६८ वटा मतदानस्थल भएपनि यस वर्ष स्थानीय तह पुनर्संरचनाअनुसार पुनरावलोकन गर्दा चारवटा बढी निर्धारण गरिएको हो । म्याग्दीमा आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनमा करिब ७२ हजार मतदाताले सहभागिता जनाउने भएका छन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाबाट ७१ हजार नौसय १२ जना मतदाताको नामावली अध्यावधिक गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्याग्दीमा १२ वटा राजनीतिक पार्टीले निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका छन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलमा चहलपहल सुरु भएको छ । राजनीतिक दल चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेका छन भने निर्वाचन कार्यालयले पनि आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्रको विवादले भने ती दुई गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेको छैन ।
PREVIOUS POST Previous post: सेक्स रोबोटको प्रदर्शनी लण्डनमा
NEXT POST Next post: घाइते भएकी महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:५३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:५३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:५३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:५३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०६:५३